Amabhulogi Wokuphila Wobuhle – Tagged "news" – SL Raw Virgin Hair LLC.
Njengomuntu wemvelo ngezinye izikhathi ufuna ukuzama ukukhanda izinwele okusha, kodwa udinga ubude bezinwele obuningi, ivolumu eyengeziwe noma ngaphansi kwakho konke. Yilapho izandiso zezinwele zingena khona. Ungakwazi ukwengeza izingcezu ezimbalwa lapha nalaphaya ukuze welule izinwele zakho, we...
Lona umbuzo wesigidi wonke umuntu afuna ukuwazi,“Ungalala kuyunithi yakho yewigi yangokwezifiso?”
Bangaki kini abake baba nesidlo sakusihlwa esikhethekile nalowo muntu okhethekile futhi nanquma ukuthi ufuna ukuqeda ubusuku ngesiphuzo esikhethekile, futhi ngemva kwalokho kudla okukhethekile ufuna ukulala ubukeka umuhle; kodwa bese uyazibuza,